Shina akanjo volon-doha ho an'ny lehilahy China ISAPPARELA
Akanjo polo fanao amin'ny lehilahy
Fomba: lobaka polo mahazatra an'ny lehilahy
Ny Logo: pirinty lamba vita amin'ny landy, pirinty niomerika mivantana, famindrana hafanana, amboradara, fanamasinana, fehiloha, pvc patch, pirinty hita taratra, logo TPU, applique
Tian'ny vondrona misy anao ny fomban'ity Controle Performance Polo ity amin'ny hetsika manaraka. Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikorohanay&oldid=18879716 '' Vita amin'ny polyester 100%, lamba maivana izy ireo. Asongadin'izy ireo ny teknolojia fanosorana ny hamandoana, fanamainana vetivety ary teknolojia fanoherana ny ketrona sy ny snag. Midika izany fa ny sivy sisa tavela amin'ny lalao dia eo amin'ny sivy aoriana.
Teo aloha: T-shirt landihazo polo
Manaraka: Lehilahy Zipper Collar Polo Shirt
Akanjo lava vita amin'ny lehilahy ...
Men Short Sleeve Half Zi ...
Akanjo polo lahy 1 ...
T-shirt landihazo polo l ...